Tsy nisy nahafantratra ny niandohany !
Fatin`dehilahy hita tamin`ny sisiny arabe tao Depot
Tsy fantatra mazava izay antony tena nahafaty ity Ray mpianakaviana ity tokotokony ho 50 taona eo eo, izay hita faty tamin`ny sisin’ny arabe tao Depot Analakininina P/lle 23/44 C8, androany, atalata maraina 10 jona 2014. Araka ny fijerin’ny maro dia mety ho tamin`ny 2 ora maraina tany ho any no nahafatesan’ ity Ray mpianakaviana ity, izay fantatry ny maro amin`ny anarana hoe Dada Gy.
Mpanamboatra bisikileta amin`ny lalana makany amin`ny sekoly Stella Maris iny no asan’ I Dada Gy. Fiara mpitondra mofo maraina no nahita an`ity razana ity ary tonga de nampandre any vahoaka manodidina avy hatrany.
Ny maraina tokony ho tamin`ny fito ora sy sasany teo eo dia efa tonga nizaha ny razana ny manam-pahefana sy ny mpitsabo.
(56) Anderson RAVO : 10-06-2014 - 10:15